အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ပဲနဲ့ကို ခံတွင်းပျက်ပြီး ဘာကိုမှစားမဝင်တဲ့အထိ နေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင်း ပြောလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင် - Cele Connections
အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ပဲနဲ့ကို ခံတွင်းပျက်ပြီး ဘာကိုမှစားမဝင်တဲ့အထိ နေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင်း ပြောလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
ချစ်စဖွယ်အပြုံးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို အေးမြစေသူလေး စိုးပြည့်သဇင်က အနုပညာလောကရဲ့ တောက်ပတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်ပါပဲ။ အနေအေးပြီး တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လွန်းတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ကို ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကပါ မချစ်ပဲနဲ့ကို မနေနိုင်ပါဘူး။ စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဂုဏ်ပကာသနထောင်လွှားခြင်းမရှိပဲ ရိုးရိုးအေးအေးလေးသာနေရင်း အလုပ်တွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်က ဒီကနေ့မှာတော့ တွင်းပျက်ပြီး ဘာကိုမှစားမဝင်တဲ့အထိ နေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။ “ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရမ်းကြိုက်တဲ့သူက အခုချဉ်စပ်မပြောနဲ့.. ဆန်ပြုတ်နဲ့ပဲ ဘယ်နှရက်ရှိပြီလဲ? ဘာစားချင်လို့ စားချင်မှန်းလည်းမသိ” ဆိုပြီး အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ပဲနဲ့ကို နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ စိုးရိမ်စရာအနေအထားမရှိပေမယ့် သူမကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ စိုးပြည့်လေးအတွက် ပူပန်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးပြည့်တစ်ယောက် အမြန်ဆုံး နေကောင်းပြီး သက်သာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အိမျထဲကအိမျပွငျမထှကျပဲနဲ့ကို ခံတှငျးပကျြပွီး ဘာကိုမှစားမဝငျတဲ့အထိ နမေကောငျးဖွဈနရေကွောငျး ပွောလာတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ
ခဈြစဖှယျအပွုံးလေးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျကို အေးမွစသေူလေး စိုးပွညျ့သဇငျက အနုပညာလောကရဲ့ တောကျပတဲ့ ကွယျပှငျ့လေးတဈပှငျ့ပါပဲ။ အနအေေးပွီး တညျငွိမျရငျ့ကကျြလှနျးတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျကို ပရိသတျတှသောမက အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးကပါ မခဈြပဲနဲ့ကို မနနေိုငျပါဘူး။ စိုးပွညျ့သဇငျကတော့ အကယျဒမီဆုရှငျတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ဂုဏျပကာသနထောငျလှားခွငျးမရှိပဲ ရိုးရိုးအေးအေးလေးသာနရေငျး အလုပျတှကေို ကွိုးစားပွီး လုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားထားတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျက ဒီကနမှေ့ာတော့ တှငျးပကျြပွီး ဘာကိုမှစားမဝငျတဲ့အထိ နမေကောငျးဖွဈနရေကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။ “ခဉျြခဉျြစပျစပျ အရမျးကွိုကျတဲ့သူက အခုခဉျြစပျမပွောနဲ့.. ဆနျပွုတျနဲ့ပဲ ဘယျနှရကျရှိပွီလဲ? ဘာစားခငျြလို့ စားခငျြမှနျးလညျးမသိ” ဆိုပွီး အိမျထဲကအိမျပွငျမထှကျပဲနဲ့ကို နထေိုငျမကောငျးဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
စိုးပွညျ့သဇငျကတော့ စိုးရိမျစရာအနအေထားမရှိပမေယျ့ သူမကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ စိုးရိမျစိတျတှနေဲ့ စိုးပွညျ့လေးအတှကျ ပူပနျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိုးပွညျ့တဈယောကျ အမွနျဆုံး နကေောငျးပွီး သကျသာပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဆေးရုံတက်နေတဲ့ ဦးကျော်သူကစလို့ ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သီတင်းကျွတ်လိုက်လံဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့တဲ့ အလင်းရောင်
နိုင်ငံပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး နိုင်ငံခြားကရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုကြီးတစ်ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ ချစ်ဇနီးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့ ရွှေထူး